Ambaasaaddar Reduwaan xalayaa muudama isaanii maaliif pirezidant Isaayyaasif hin dhiheessine? - BBC News Afaan Oromoo
Ambaasaaddar Reduwaan xalayaa muudama isaanii maaliif pirezidant Isaayyaasif hin dhiheessine?
Goodayyaa suuraa Ambaasaaddar Reduwaan Huseen osoo Asmaraatti hin ramadamin Ayirlaandiiti Ambaasaaddara Itoophiyaa turan
Biyya Ertiraatti Ambaasaaddara Itoophiyaa kan ta'an Reduwaan Huseen xalayaan itti muudaman biyya Ertiraatti fudhatama hin arganne kan jedhame soba jechuun Ministeerri dhimma alaa ibse.
Gidduu kana miidiyaa hawaasummaa gubbaa muudamni isaanii mootummaa Ertiraatin fudhatama hin arganne kan jedhu ijoo dubbii ta'ee ture.
Dubbii Himaa Minsiteera Dhimma Alaa kan ta'an Obbo Nabiyaat Getaachaw akka jedhanitti Ambaasaaddar Reduwaan Pirezidantii Ertiraaf xalayaa dhiheessuullee baatan hojiitti jiru.
''Xalayaan muudamaa Ambaasaaddara tokko fudhatama hin arganne kan jedhamu, Ambaasaaddarichi biyya itti ramadaman keessa yeroo hojjechuuf eeyyama dhabanidha.
Reduwaan Huseen Asmaraatti Ambaasaaddara Itoophiyaa ta'an
''Ambaasaaddar Reduwaan xalayaa muudama isaanii guyyaa sadaffaatti Ministeera Dhimma Alaa biyyattiif dhiheessaniiru.
''Sababa kanaanis, hojii isaanii hojjetaa jiru. Ambaasaaddarri tokko biyya itti ramadametti fudhatama osoo hin argatin hojii eegaluu hin danda'u,'' jedhan
''Dhimmi Ambaasaaddara Reduwaanis kanarra adda kan ta'e miti,'' jechuun Obbo Nabiyaat dubbatu.
Ambaasaaddar Abdallaa Adam biyya Sudaanitti Ambaasaaddara Ertiraa turan. Akka isaan jedhanitti immoo Ambaasaaddarri tokko biyya itti ramadametti osoo hin deemin ji'a sadii dura xalayaan muudamaa biiroo Ministeera Dhimma Alaatti ergama.
Osoo biyyi itti ramadamanitti fudhatama hin argatin deemuufi hojii hojjechuun hin danda'amu jedhu Ambaasaaddarri duraanii Ertiraa kuni.
Haa ta'u malee, ''Pirezidantiin tokko xalayaa muudama isaa pirezidantii bira geessee osoo hin ragga'in, walitti dhufeenyi inni ambaasaaddaroota biyyoota itti ramadame waliin qabu irratti xiqqaatus dhiibbaa qaba,'' jedhu.
Gama kaaniin, Obbo Nabiyaat adeemsa Itoophiyaa keessa jiru yoo himan sagantaa pirezidantiin qopheessan irratti ambaasaaddaroonni xalayaa isaanii dhiheessu.
Hammasitti garuu hanga waajjira Ministeera Dhimma Alaatti xalayaa muudama isaanii hanga galchatanitti hojii akka eegalan dubbatu.
Sagantaan akkanaa dhihootti akka Asmaraa keessa hin taasifamne eeruun biyyi Itoophiyaa waggaa darbe Ambaasaaddaroota muudde keessaa xalayaa isaanii pirezidantii biyya itti ramadamanitti kan hin dhiheessin akka jiran himan.